Sida loo Guba CD ka Youtube - Guba Youtube Music inay CD?
Waxaan jeclaan lahaa inaan u qoraan qaar ka mid ah Gurtida ka YouTube gal maran CD-R? Tani ma suurto gal ah iyo sida ay gubaan cd ka videos music youtube? Thanks. -Babyblue
Sida nin ee kor ku xusan, waxaa jira waqtiyo aad rabto in aad kala soo bixi music ka YouTube in CD. Haa, waa fikrad wanaagsan in aad qaadato aad jeceshahay music YouTube iyo music gubi youtube in cd, si aad u maqli karo in gabi ahaanba dheeraad ah oo ku haboon by loo maqli karo ciyaartoy CD iwm
Si aad u gubi music youtube in cd, dhab ahaantii, waxa ay inta badan ka sahlan badan aad u malaynayso. Just helo hab la isku hallayn karo si lagaaga caawiyo in aad kala soo bixi aad jeceshahay music YouTube, ka dibna ku gubi galay CD la smart YouTube ah in ay gubi CD. Sidaas, dhibaato dhab ah aad la kulmi kartid waa in sida si loogu badalo music off YouTube videos. In this article, waxaan ku sharxi doonaa sida ay gubaan music youtube inay tallaabo cd talaabo.
Xalka 1.TunesGo ---- Download music Youtube oo lacag la'aan ah iyo cd ka youtube gubi
Xalka 2.Streaming Audio Recorder ---- gubi cd ka youtube
1 Sida loo Download music Youtube oo lacag la'aan ah?
Waxaad gudbin karaan tutorial this: Sidee si ay u gubaan youtube in cd free via TunesGo
2 Sidee si ay u gubaan youtube in cd?
Waxaad gudbin karaan tutorial this: Gubashada music Youtube si CD
Waxaan u isticmaali kartaa smart Streaming Audio Recorder in youtube gubi in cd iyo waxa ay sii kordhineysaa in Lugood. Sida aan ognahay, Apple Lugood uu awood u leeyahay of music gubanaya si CD. Sidaas halkan, waxaan u isticmaal sida CD YouTube ku gubi lagu shido music YouTube in CD. Hoos waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan.
Fiiro gaar ah: Dabcan, haddii aad leedahay YouTube kale si Converter CD in Eebe idin ​​gubi ka dooxay YouTube MP3 music inay CD, sidoo kale waxa aad isku dayi kartaa.
1 Download music ka YouTube u gubashadii CD
Kadib markii ay Streaming Audio Recorder, ee geeska kore ee bidix ee ay interface ugu weyn, riix "Record" badhanka si loogu badalo music ka YouTube. Next, u tag YouTube si aad u ogaato iyo muusig aad jeceshahay (oo ay ku jiraan videos music). Sida ugu dhakhsaha badan music la ciyaaro, app this si toos ah u Qoraynaa doonaa. Marka aad guji badhanka mar ama music ka joogsanayso ka ciyaaro, app joogsan doonto duubo. Sidaas daraaddeed iska jira ah music online YouTube waa ay awoodaan in ay si habsami leh u ciyaaro.
2 music Import YouTube in Lugood iyo gubi music on cd
Marka uu sameeyo, music YouTube ku badbaadi doontaa qaab MP3 maktabadda this app ee. Haddii aad ku rakibtay ka app Apple Lugood, waxaa jira ah "Add to Lugood" badhanka hoose ee interface ugu weyn. Just u riixi ku darto music YouTube in ay Lugood u gubashadii CD. (Ogow in dadka isticmaala Mac u baahan tahay inaad gacanta jiidi music si ay Lugood.) Ka dib, waxaad ka heli doontaa music ayaa intaa ku daray in ay "SAR" playlist ee Lugood aad.
3 bilow si ay u gubaan YouTube in CD
Ka dib galinta CD maran on your computer, in Lugood, riix this "SAR" playlist, ka dibna tag "File"> "Guba playlist in cajalid" menu. Daaqadda dhisayaa-up, waxaad u baahan tahay in ay doortaan "Audio CD" ee ciyaaryahan CD iyo "MP3 CD" ciyaaryahanka CD-MP3 awood. Dabcan, hadii aad doonayaa inaan u bedelaan ilaa music, ee "Data CD ama DVD" doorasho waa doorashadaada. Ugu dambeyntii, riix "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya music YouTube in CD. Waa intaas.
Haddii loo baahdo, ka heli Lugood laga goobta Apple .
Tip dheeraad ah: Mararka qaarkood, music helay ka YouTube laga yaabaa in aysan haysan macluumaad dhamaystiran sida artist, horyaalka, farshaxanka iyo lyrics album, sidaas waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay TidyMyMusic Wondershare u Mac si ay uga caawiso ka heli kartaa macluumaad ku maqan. Sidaas, waxaad yeelan doontaa maktabad music nidaamsan u fududahay in uu abaabulo. Waxaad isticmaali kartaa aalad si ay u abaabulaan music oo dhan ku Lugood iyo your computer. Ma sugi karaa in ay isku day ah? Waxaa Download hoose oo bilaabi waayo-aragnimo music sixir.
Hel barnaamijkan ka socda Download link oo u dhiiba isku day ah oo ku saabsan Mac.
Isbarbar Feature ---- software gubashadii cd music
> Resource > Video > Sida loo Guba YouTube Music inay CD